बजगाईँले गरे विनय खेमाको धाँधलीको पर्दाफास : विनय खेमा मोर्चाका नेता, नेताका स्वास्नी र आफन्तहरूको हातमा नियुक्तिपत्र : बेरोजगारहरूको भविष्यसित यसरी गरिएको छ खेलवाड (भिडियोसहित) - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारबजगाईँले गरे विनय खेमाको धाँधलीको पर्दाफास : विनय खेमा मोर्चाका नेता, नेताका स्वास्नी र आफन्तहरूको हातमा नियुक्तिपत्र : बेरोजगारहरूको भविष्यसित यसरी गरिएको छ खेलवाड (भिडियोसहित)
बजगाईँले गरे विनय खेमाको धाँधलीको पर्दाफास : विनय खेमा मोर्चाका नेता, नेताका स्वास्नी र आफन्तहरूको हातमा नियुक्तिपत्र : बेरोजगारहरूको भविष्यसित यसरी गरिएको छ खेलवाड (भिडियोसहित)
May 16, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार 0
विनय तामाङहरूको धाँधली पर्दाफास गर्दै बजगाईँ
बजगाईंअनुसार कालेबुङको सप्तश्री पढाइरहेका एकजनालाई कुमुदिनी होम्समा नियुक्ति दिइएको छ। जो स्कूलमा थिँदै थिएनन्। अधिकांशलाई नै नक्कली कागज बनाएर नियुक्ति दिइएको छ र व्यापक घोटला गरिएको छ। नागरी र युद्धवीर स्कूलमा दिइएको नियुक्ति सबै धाँधलीपूर्ण छ। सिक्किममा पत्रकार भइ खाइरहेकालाई बाग्राकोट हाई स्कूलमा नियुक्ति दिइएको छ। अमृत योञ्जनको स्वास्नीलाई महारानी गर्ल्स हाई स्कूलमा नियुक्ति दिइएको छ, जसले महारानीमा पढाएकै छैनन्। आरकेएसपी बोइज हाई स्कूलमा केशवराज पोखरेललाई दिइएको छ। माध्यमिक गर्नेलाई समेत नियुक्ति दिइएको छ। कसैले पनि क्राइटेरिया पूरा गरेका छैनन्।
दार्जीलिङ, 16 मई
बङ्गाल सरकारले ‘बाङ्गला शिक्खा’-को नाममा पाठ्यपुस्तकमार्फत भाषिक, सांस्कृतिक दमन गरिरहेको आरोप लगाउने वित्तिकै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा प्रवक्ता बीपी बजगाईँलाई बङ्गाल प्रशासनले विभिन्न मुद्दा लगाएको छ।
उनै बजगाईँले आज जिटिएको कार्यशैली र नियुक्तिको मनोपोलीको पोल खोलेका छन्। उनले विनय तामाङ खेमालाई बाह्र घन्टाको समय दिँदै भनेका छन्, ‘बाह्र घन्टाभित्रमा विनय तामाङ र बङ्गालको शिक्षा विभागले नियुक्ति पाइसकेका 313 जना शिक्षक-शिक्षिकाहरूको नाम सार्वजनिक गरुन्, तोकिएको समयसम्म गरेन भने म सार्वजनिक गर्नेछु।’
बजगाईँले यसो किन भनेका हुन् भने उनीसित नियुक्ति पाएका शिक्षक-शिक्षिकाहरूको पूर्ण सूची छ। जुन सूचीले विनय तामाङको मनोपोली, आफ्नो मान्छे छेप्ने वृत्ति, भाइभतिजावाद र व्यापक विशृङ्खलताको पोल खोलेको छ।
एक त विनय तामाङहरूले नियुक्तिबारे कानूनले तय गरेको विधि मिचेर मनपरी नियुक्ति दिएका छन्, त्यहीँमाथि आफ्नै नेता, नेताका स्वास्नी, भतिज, भान्जाभान्जी, दिदी बहिनीहरूलाई नियुक्ति थमाएका छन्।
बजगाईँले आफूसित रहेको दस्तावेज देखाउँदै भने, ‘भर्खरै शारदा सुब्बा राईले विनय तामाङको पार्टीको युवा मोर्चा प्रवक्ता सन्दिप छेत्रीलाई विनय तामाङहरूले नियुक्ति दिएको उजागार गरेकी थिइन्। सुब्बाले त सन्दिपको मात्रै बताइन्। तर विनय तामाङले आफ्ना नेताहरू त भइहाल्यो, नेताका स्वास्नी, आफन्तहरूलाई नियुक्ति दिएका छन्।’
उनले लिएका नामहरूमा प्रमुखरूपमा सन्दिपपछि केशवराज पोखरेलको छ। अमृत योञ्जनको पनि नाम छ।
बङ्गालको शिक्षा विभागले 271 जनालाई नियुक्ति दिने अर्डर निकालेको छ। नियुक्ति पाएका छन् 313 जनाले।
नियुक्ति त्यसले पाउँछ, जोसित कुनै पनि स्कूलमा तीनवर्ष पढाएको अनुभव हुनुपर्छ। बजगाईँअनुसार6वटा यस्ता क्राइटेरियाहरू तय गरिएको छ, त्यसलाई पूरा गर्नेले मात्र नियुक्ति पाउनु पर्ने सरकारी नियम छ। तर 313 जनामा अधिकांशले नै क्राइटेरिया पूरा गरेका छैनन्। क्राइटेरिया नै पूरा नगर्नेहरूलाई धमाधम नियुक्ति दिइँदैछ। त्यही नियुक्तिमा व्यापक धाँधली लुकेको छ।
‘जम्मै क्राइटेरिया पूरा गर्नेलाई मात्र नियुक्ति दिइनुपर्ने हो तर विनय तामाङहरूले तीन वर्षको अनुभवको त कुरै छैन, माध्यमिक गरेर बसेकालाई पनि नियुक्ति दिएका छन्। 313 जना प्राथमिक र हाई स्कूलमा नियुक्ति दिइएका मध्ये 86 जनाले त कुनै पनि क्राइटेरिया पुरै गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यसमा विनय तामाङहरू र डिआई मिलेर व्यापक धाँधली गरिएको छ। सम्बन्धित स्कूलमा कहिल्यै भोलेन्टियर नै नगरेकालाई नियुक्ति दिइएको छ।’
मदन तामाङ हत्याकाण्डमा परेका र 2012 मा नै स्कूल छोडेका केशवराज पोखरेलको नाम पनि 313 जनाको को सूचीमा छ। ‘भर्खरै शिक्षकै सन्दर्भमा मेरो बयानको काउन्टर गर्नुको पोखरेलको बाध्यता त यस्तो पो रहेछ,’ उनले भने।
बजगाईंअनुसार कालेबुङको सप्तश्री पढाइरहेका एकजनालाई कुमुदिनी होम्समा नियुक्ति दिइएको छ। जो स्कूलमा थिँदै थिएनन्। अधिकांशलाई नै नक्कली कागज बनाएर नियुक्ति दिइएको छ र व्यापक घोटला गरिएको छ। नागरी र युद्धवीर स्कूलमा दिइएको नियुक्ति सबै धाँधलीपूर्ण छ। सिक्किममा पत्रकार भइ खाइरहेकालाई बाग्राकोट हाई स्कूलमा नियुक्ति दिइएको छ। अमृत योञ्जनको स्वास्नीलाई महारानी गर्ल्स हाई स्कूल नियुक्ति दिइएको छ, जसले महारानीमा पढाएकै छैनन्। आरकेएसपी बोइज हाई स्कूलमा केशवराज पोखरेललाई दिइएको छ। माध्यमिक गर्नेलाईसमेत नियुक्ति दिइएको छ। कसैले पनि क्राइटेरिया पूरा गरेका छैनन्।
‘अचम्म त यहाँसम्म छ स्कूल नगएका, आइसीडीएस वर्करलाई तृणमूल नेताको स्वास्नी भएको नातामा नियुक्ति दिइएको छ। दुइजना दाजु भाइलाई फेक सर्टिफिटेक निकालेर डीआई जाँचमा छिराइएको छ,’ बजगाईँले भने, ‘सन्दिप छेत्री, स्कूल नै गएका छैनन्, नियुक्ति दिइएको छ। एलिजिबिलिटी नभएका सैयौं शिक्षकहरूलाई बीएड इक्जाममा राखिएको छ। माइनोरिटी स्कूलहरूमा 96 जनाको जुन नियुक्ति दिइएको छ, अनित थापाले भतिजलाई काम दिएका छन्।’
बजगाईँले विनय तामाङहरूले वेरोजगारहरूको भविष्यसित खेलवाड गरिरहेको बताएका छन्। ‘राजनीति पनि आफै गर्ने नोकरी नि आफै गर्ने यो कस्तो सोच र विचार हो?’, उनले भने, ‘पहाडका बेकारीहरूको पालो कहिले आउने? जुन किसिमको पाठ्य पुस्तक तयार हुँदैछ, त्यो हेरेर अब अभिभावकले नानीहरू स्कूल पठाउँदैनन्। नानीहरू नगएपछि स्कूल बन्द हुन्छ। गरीबका नानीहरू त्यसपछि कहाँ पढ्ने? युवाहरूको भविष्य किन खोस्दैछन् विनय तामाङका पार्टीका नेताहरूले? विनय तामाङहरू राजनीति गर्न गएको कि धाँधली गर्न?’
विनय तामाङको जनसभामा आश्वासनहरूको चाङ
विनय तामाङको अर्को षडयन्त्र पनि खुलासा : पर्जापट्टाको नाममा सुकुम्बासी बनाउने चलखेल गरिँदैछ-लीलाकुमार गुरुङ
विमल गुरूङले आज अचानक खुलासा गर्दै भने-दिल्लीले बोलाउँदैछ, गोर्खाल्यान्डको लागि हो भने मात्रै जान्छुः गुरूङ उत्रिए सांसदको राजिनामा मागको विपक्षमा (30,802)
केन्द्रिय गृहमन्त्रीको निम्तोः गोजमुमो-जीएमसीसी टोलीको दिल्ली प्रस्थान (20,454)